Wasaaradda arrimaha dibadda oo sheegtay in maalgashi lagu sameyn doono waddanka |
Wasaaradda arrimaha dibadda oo sheegtay in maalgashi lagu sameyn doono waddanka
Kamagra Polo buy online, buy clomid online.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Dhiiragelinta Maalgashiga Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in dhowaan ay dalalka caalamka si rasmi ah u bilaabi doonaan maalgashi ay ku sameynayaan Kheyraadka kala duwan ee Soomaaliya ayadoo dhanka kalena ay Wasaaraddu soo bandhigtay tirada Ajaaniibta u af duuban Burcad Badeeda Soomaaliyeed.
“Waxaad arkaysaa dalal badan oo daneynaya inay waddanka lugta la soo galaan, oo ay arrin caafimad qabta ula yimaadaan maalgashiga ayaana ka mid ah” ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle.
Wuxuu tilmaamay in shirkado badan ay la soo xiriireen wasaaradda si ay u helaan macluumaad ku saabsan sida ay maalgashi ugu sameysan karaan waddanka, ayadoo ay wasaaraddu ay si joogto ah warbixinno u siiso dowladaha iyo shirkadaha daneynaya inay waddanka maalgashadaan.
Sidoo kale wuxuu tilmaamay in dowlado ay ku jiraan Turkiga iyo Shiinaha ay maalgashi ku sameysan doonaan waddanka taas oo dhalin doonto iyo dhaqaalaha iyo dhismaha waddanka uu kor u kaco.
Wasiir Beyle ayaa ku baaqay in la sii daayo dadka ajaanibta ah ee waddanka lagu heysto, isagoo dhinaca kale ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan sidii loo badbaadin lahaa dadka ka shaqeynaya maashaariicda horumarineed iyo kuwa gargaarka ah ee dalka ka socda.